Banky Iraisam-pirenena: 60 tapitrisa dolara hampandrosoana ny any ambanivohitra | NewsMada
Banky Iraisam-pirenena: 60 tapitrisa dolara hampandrosoana ny any ambanivohitra
Nankatoavin’ny Banky iraisam-pirenena (BM), ny 30 aogositra teo tany Washington, ny famatsiam-bola mitentina 60 tapitrisa dolara, fanomezana avy amin’ny Fikambanana iraisam- pirenena ho an’ny fampandrosoana (Ida). Entina hanampiana an’i Madagasikara, hanamafisana ny fiatrehan’ny tokantrano malagasy ny tranga tampoka amin’ny lafiny toekarena, indrindra ny eny ambanivohitra, io vola io.
Tsara ny vokatra toekarena ankapobeny, tombanana ho 5% amin’ity taona 2018 ity, saingy tsy mipaka eny ifotony. Mahatsikaritra ny BM fa nahatonga izany ny fandrosoan’ny indostria sy ny anton-draharaha na tolotrasa nefa tsy voajery ny eny ambanivohitra. Nilaza Rtoa Coralie Gevers, solontenan’ny BM eto amintsika, fa fanamby ho an’i Madagasikara ity fandaharanasa ity, hiantraika any amin’ny isan-tokantranon’ny Malagasy ny vokatra tsara amin’ny toekarena ankapobeny. Ao anatin’izany ny ahafahana miatrika ny tranga tampoka tsy ampoizina, ny fampiroboroboana ny fampandrosoana.
Fanindroany ny nisian’ity fanampian’ny Ida ity. Hanamafy ny efa natao tamin’ny andiany voalohany ny fikarakarana ny sora-piankohonana, ny fiarovana sosialy, ny fahafahana miditra amin’ny sehatry ny vola, ny lafin-tany, ny famatsiana herinaratra sy ny fikojakojana lalana eny ambanivohitra, sns.